Ku Layli Soo-saareyaasha Maqaarka, Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Maqaar Ku Tababar
Maqaarka Tababbarka Weyn ee jilicsan ee loo yaqaan 'Silicone Silicone' oo loogu talagalay Farshaxanka Jirka ee Farshaxanimada Cilmiga Fudud ee Dhabarka Tattoo ee Dhabarka Dhabarka ah
Silikoon dhab ah, midab jilicsan oo sahlan, midab dhumucdiisuna tahay 0.3cm, Sharaxaad: Dareenka rogrogmi kara, maqaarka maqaarkiisa, tageerayaasha wanaagsan ee bilowga ah. Ku dayashada astaamaha qaab dhismeedka maqaarka dadka, Waxaa laga sameeyaa maado gaar ah oo ugu dhow maqaarka jirka bini aadamka, qaab dhismeedkiisuna waa mid jilicsan oo laastikol ah una dhow midka maqaarka dadka. Waa alaabada ugu fiican ee tababarka bilowga kahor hawlgalka dhabta ah. (Ardayda qaar waxay dhaheen maqaarka leyliska waa u fududahay wasakhdiisa. Halkan waa hab fiican oo adiga kugu habboon,
39.5 * 30 * 0.3CM A3 cabbirka Rubber Maqaarka Artifishalka ah ee maqaarka qurxinta Joogtada ah
1.Quantity: 1pcs 2.Waxaa lagu sameeyaa walxo silikoon heer-cunto ah 3.Flexible oo aad ula mid ah maqaarka dadka, qaro weyn oo ku filan isticmaalka labada-dhinac ah 4.Free rinjiyeynta iyo qaabka wareejinta, waa maqaarka ugu fiican ee loogu talagalay bilowga inay isticmaalaan. Faahfaahinta: Waxyaabaha: Cabirka Leather ee Jilicsan ee Artifishalka ah: 395 * 300 * 3MM Xidhmada oo Ay Kujiraan: 1 x Tilmaanta Tababar Tattoo oo ah Maqaar lakab leh oo leysku ururiyey oo hayaa khad isla markaana tirtiri kara maro ama tuwaal warqad ah si looga saaro khad xad dhaaf ah! Waa maxay ujeedku ...
20cm * 30cm Maqaam Tababar Madhan oo loogu talagalay Qurxinta Joogtada ah ee Tattoo Microblading
Maqaarka Madhan ee Maqaarka ah ee loogu talagalay Qurxinta Joogtada ah ee Microblading Tattoo Tool Qalabka Qalabka Maqaarka Sunta ah: 1.Tababarka jimicsiga maqaarku ma laha wax nijaas ah iyo taabashada maqaarka oo ka sii wanaagsan. 2.Shaqo jimicsi ficil ah oo jimicsi ah, wuxuu kaa caawinayaa sida loo barto sameynta shaqo tayo sare leh. 3.Kabeelo farsamooyin kaladuwan, laga bilaabo dulucda illaa hooska 4.Extra dheeri ah, maqaarka sida midabka, maqaarka oo aad ugu dhow maqaarka aadanaha wuxuuna leeyahay dareen la mid ah maqaarka dadka. 5.Ideal ku duudduubka gacmaha ama lugaha oo saar xabadka ama dhabarka ...
3D wajiga wajiga maqaarka 3D Microblading Joogtada ah qurxinta sunnaha faruuryaha faruuryaha bini aadamka mannequin madaxa wajiga maqaarka
3D Mannequin Head Face Permanent Makeup Practition Maqaarka oo ay ku jiraan: (2Pcs Indhaha, 1Pcs Dibnaha, 1 qaabka madaxa) * 1 nooc Aad ayey faa'iido ugu tahay bilowga cusub inay bartaan qurxinta joogtada ah. 1. Astaamadu waxay u egyihiin qaab nololeed dabiici ah oo lagu qurxiyo maqaarka 2. Indhaha iyo afka oo si fudud loo beddeli karo oo si isdaba joog ah loo isticmaalo 3. Meelaha laba jibbaaran ee indhaha la geliyo waxay sidoo kale daboolayaan sunnaha suunka 4. Dheeraad dheeri ah oo gooni gooni ah ayaa loo iibiyaa sheygan waxaa loo isticmaalaa bartayaasha qurxinta joogtada ah. Aad ayey waxtar ugu leedahay bilowga. Waad beddeli kartaa indhaha iyo mou ...
20 x 15cm Xaashida Mashiinka Mashiinka Tattoo ee Madhan
Ka samaysan caag isku ekeys ah oo u eg wax jilicsan oo jilicsan Tani waa wax ku fiican barashada sida loo sawiro sawirka meydka sawirka Dhabarka dambe ee maqaarkan been abuurka ah ayaa la isticmaali karaa 20x15cm Miisaanka: 50g Abaabul socodkaaga shaqada - Ink ayaa runtii qasan. Fadhiga tababarka waa hab fiican oo lagu fahmo sida looga shaqeeyo agagaarka tattoo. Markaad horumariso xirfadahaaga, waxaad ka fogaan doontaa daadinta iyo faafinta khad inta lagu guda jiro sawirkaaga ugu horreeya. Tusaale ahaan, waad ogaan kartaa
Maqaarka Tababarka Qurxinta Joogtada ah ee Joogtada ah 290 * 195 * 3MM Bilowga Qafiifka ah ee Silicone Tattoo Layliska Maqaarka
1. Ka caawi dadka bilowga ah inay si dhakhso leh kor ugu qaadaan heerka tattoo-ga. 5. Waxay fududeyneysaa shaqada farshaxanistaha. Magaca: ku celceli maqaarka Waxyaabaha: silikoon Baarkinka Baarkinka: 290 * 195 * 3MM Miisaanka Guud: 0.22 Kg Maqaarka ugu Fiican ee Tababbarka Maqaarka Kaliya dhawr sano ka hor, farshaxan-yahannada sawiradu waxay lahaayeen xulashooyin aad u xaddidan markay u yimaadeen inay ku dhaqmaan maqaarka. Badankood waxaa laga sameeyay caag ama caag, ...
Gacanta ku hay faashad Maqaarka Tababbarka Tilifoonka jilicsan ee jilicsan
1. Waxyaabaha: maqaar jilicsan oo dabiici ah 2. Cabirka Nooca 1: 20 * 20 * 3cm Nooca 2: 15 * 15 * 3cm Xidhmada Waxaa Ka Mid Ah: 1 x Tababar Tababar Tattoo Oo Kordhinta Xirfadahaaga Maqaarka Tababarka Tattoo Xitaa farshaxanka ugu fiican ee farshaxanka ayaa had iyo jeer baranaya farsamooyin cusub oo isku dayaya inay ballaadhiyaan xirfadooda. Maqaarka jimicsiga tattoo waa aaladda ugu dambeysa ee xirfadaha hagaajinta ganaaxa iyo sidoo kale abuurista qaybo aad ku soo bandhigi karto macaamiisha mustaqbalka. Naqshadeynta maanta waxay ku lug leedahay iftiiminta iyo hooska adag ee qaadanaya ...
20 * 30 * 0.13cm taranka taranka timaha timaha timo tayo sare leh Qurxinta joogtada ah qurxinta sunnaha maqaarka Microblading maqaarka sahayda
Tattoo Practice Maqaarka maqaarka tababarka oo tayo sare leh *** Xidhmada: 1pcs *** Dusha sare ee naqshadeynta iyo ku celcelinta xurmada, Ku tababaro farsamooyin kala duwan, laga bilaabo tilmaam ilaa hadh dhigid *** Ka sameysan waxyaabo maqaar u ekeysan oo la mid ah *** Kuu ogolaada inaad hagaajiso Xirfadaha iyada oo aan lagu tababbarin maqaarka dhabta ah Is-bedbeddelka oo leh dareen la mid ah maqaarka aadanaha, Adag oo ku filan isticmaalka laba-geesoodka ah Ficil: Tattoo Practice Size: 200 * 300 * 1.3mm Miisaanka: 0.1kg Xirxirida: 1pc / opp bag Sida Ugu Waxtarka Badan Loo Adeegsado Maqaarka Tattoo Gudaha ...
20 * 15 * 0.13cm taranka taranka timaha timo timo tayo sare leh maqaarka qurxinta Joogtada ah eyebrow tattoo tababarka maqaarka Microblading sahayda
Tattoo Practice Maqaarka maqaarka tababarka oo tayo sare leh oo loogu talagalay qurxinta Waxyaabaha: 1. Ka caawi dadka bilowga ah inay si dhakhso leh kor ugu qaadaan heerka tattoo 2. Waxyaabaha loo yaqaan 'synthetic synthetic', aamin ah, oo aan lahayn waxyaabo waxyeello leh 3. Is bedbeddeli kara, dareen dhab ah 4. Ku habboon kuwa bilowga ah iyo farshaxanno khibrad leh. 5. Waxay fududeyneysaa shaqada farshaxanistaha. Faahfaahinta: 1. Waxyaabaha: maqaar jilicsan oo dabiici ah 2. cabirrada: 200 * 150 * 1.3MM 3. Miisaanka saafiga ah: Xidhmada 80g / PCS oo ay kujirto: 1x Tattoo Practice Maqaarka Tattoo Dhaqdhaqaaqa Maqaarka - Talooyinka iyo Faa'iidooyinka ma leh ...